Blibli အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် APK（46.8MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Blibli - Online Mall
Hikmah Ramadhan က Ramadhan က RAP ကို ​​Backback အထိရတယ်။ Blibbli မှာစျေးပေါတဲ့ Ramadhanmu နံပါတ် 1 က IDR 10,000 ကနေစျေးပေါတဲ့ Rambli application မှာ0ယ်ခြင်းက IDR-BLEAKE 1 ကနေစျေးပေါတယ်။ 12 - 14 မေလ 2021 သင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောပရိုဂရမ်အမျိုးမျိုးတွင်ရာမဒန်၏ဉာဏ်ပညာကိုသင်ရှာတွေ့နိုင်သည်။ RP အထိ cashback ကောင်းချီးမှစတင်ခြင်းမှစတင်သည် 1 သန်းအထိကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည် 7,000 တွင်စျေးပေါသော flash ရောင်းချမှု Mantul မှစတင်သည်အထိ 85% အထိလျှော့စျေးများကိုလျှော့စျေးအထိလျှော့စျေးများကိုလျှော့စျေးအထိလျှော့စျေးများကိုလျှော့စျေးအထိကျဆင်းခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ဂိမ်းကစားခြင်းသည် 100% cashback နှင့်အခြားစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောဂိမ်းများကိုရရန်ဉာဏ်ပညာကိုမျှဝေပါ။ Blibbli application ကိုယခု download လုပ်ပါ။
Mother Mother Fashion, Gadgets, Gadgets, Electronics, Electronics, Electronics, Electronics, Electronics, Electronics, Electronics, Electronics, Electronics, Senition Tools တို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ နှင့် BPJs packages များ။ အားလုံးလွယ်ကူသော, ကျေနပ်မှုရရန်အာမခံချက်။
Blibbli အွန်လိုင်းစတိုးဆိုင်များတွင်အခမဲ့စျေး0ယ်ခြင်းများ # Karenakamuno1
MultiStitamins များ, ကလေးများ၏ကလေးများ, အိမ်စောင့်ရှောက်မှု, ခန္ဓာကိုယ်စောင့်ရှောက်မှု, အခမဲ့စျေးဝယ်ခြင်းစတော့ရှယ်ယာများထဲမှရွေ့လျားနေသောပစ္စည်းများကိုချက်ချင်းပို့ပါ။
အွန်လိုင်းဆိုင်များ, အွန်လိုင်းကုန်ပစ္စည်းများနှင့်အခြားသူများ မှစတင်. ထည့်သွင်းထားသောအွန်လိုင်းဆိုင် Blibbli သင်ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ ရွေးချယ်စရာများစွာ, surely ကန်အမှန် Ori, ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်မြန်ဆန်သည်, လွယ်ကူသည်။ သင်ရရှိသော cod feature (Pay Occup တွင်ပေးဆောင်ရသော) စျေးဝယ်ခြင်းနှင့်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။
blibbli ရှိအခြားအားသာချက်များဖြင့်အွန်လိုင်းကောင်းကျိုးများဖြင့်အွန်လိုင်းစျေးဝယ်ခြင်းများ -
b> ရေကြောင်းပို့ဆောင်ခြင်း အင်ဒိုနီးရှား
b >> အသီးအသီးရမှတ်တွေအများကြီးရတယ်။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းအဖွဲ့0င်များပြီးနောက် MOXTORE နံပါတ်ကိုစစ်ဆေးပါ။ RP မှရရှိသောစျေးဝယ်ဘောက်ချာများအတွက်လဲလှယ်ရန်အတွက်ထုတ်ကုန်များကိုဈေးဝယ်ခြင်း / ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုပြုလုပ်သောအချိန်များမှရမှတ်များကိုရရှိသော အချိန်မှစ. ရရှိသည်။
0 ယ်ယူသူစောင့်ရှောက်ရေး: [email protected] သို့မဟုတ်ဖုန်း 0804 1 871 871. Facebook: Blibbli ။ ComBr> Twitter & Instagram: @ blog: blog: https://www.blibli.com/friends/
* သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခြေအနေများ Apply
ဘာအသစ်လဲ Blibli - Online Mall 8.2.1
BliBli WAREHOUSE Company Profile